China - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Nnukwu mgbidi na ndị agha Terracotta, nleta abụọ dị ukwuu na China (II)
Nke a bụ isiokwu nke abụọ gbasara Akwa Mgbidi na ndị agha Terracotta, nleta abụọ dị ukwuu na China (II). Anyị na-ekwu okwu, n'oge a, banyere ndị agha.
Nnukwu mgbidi na ndị agha Terracotta, nleta abụọ dị ukwuu na China (I)
Nke a bụ isiokwu mbụ nke ngụkọta nke abụọ anyị ga-arara na Great Wall of China na Terracotta Army, nnukwu nleta abụọ na China.
Gastronomy nke China, ụdị asatọ dị ụtọ nke ukwuu
Are na-aga China? Know ma na e nwere achịcha ama ama asatọ mana ọtụtụ narị ihe ụtọ atọ? Jide n'aka na ị ga-anwale ọmarịcha nri ndị China. Will ga-inu mkpịsị aka gị!
China: Ọrụ ụmụ nwanyị, ejiji ejiji na egwuregwu ọdịnala
Mụta ntakịrị banyere mmalite nke ọdịbendị ndị China ugbu a: ọrụ ụmụ nwanyị, akwa ejiji na ụfọdụ egwuregwu ọdịnala.
Azụ ahịa abalị Donghuamen nke Beijing na-emechi
Na Spen na gburugburu anyị, iri ụmụ ahụhụ dị ka ezigbo ọgba aghara nye anyị. Ma nke bụ eziokwu bụ na…
Kedu nọmba nọmba anwansi na China na gịnị ka ọ pụtara? Chọpụta ihe kpatara enwere ọnụọgụ pụrụ iche na China ma ị ga - ama ma ọ bụrụ na ọ bụ nọmba ihu ọma maka gị.
Na-eme atụmatụ njem China gị? Chọpụta ihe ncheta asaa ndị China na-ahụkarị, onyinye dị oke egwu iji ju ndị enyi na ezinụlọ gị anya.
Panda Bear: n'etiti ịhụnanya na ụjọ
Panda ahụ ọ hụrụ mmadụ n'anya ka ọ dị egwu? Chọpụta ihe nzuzo niile nke anụmanụ a na-ahụkarị na Asia nke nọ na egwu.
Fọdụ ihe na-atọ ụtọ banyere China: akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị, ọdịdị ala na ebe nkiri
Anyị na-achọpụta ihe niile gbasara China: akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị, ọdịdị ala, ebe nkiri na nkuku nke ị na-agaghị echefu na njem gị gaa mba Eshia
Gorges Dam atọ, ihe ịtụnanya ndị China
Ọdụ mmiri atọ ahụ bụ otu n’ime ọrụ ebube dị ịtụnanya nke injinịa China. Chọpụta ihe nzuzo ya, ihe eji ya na ebe ị ga - ahụ ya
Lotus Building, a lotus ifuru ekara ụlọ na Wujin
Osimiri kacha mma na China
N’isiokwu a anyị na-eme ntakịrị nyocha banyere ụfọdụ ụsọ osimiri kacha mma ị nwere ike ịchọta na China. You maara ha niile?
Cablegbọ ala ụgbọ ala kachasị dị ize ndụ n'ụwa, na China
Enwere ọtụtụ ụgbọ ala USB na Eshia mana enweghị nke ị ga-ahụ n'obodo Yushan, na China: ụgbọ ala ụgbọ ala kachasị dị ize ndụ n'ụwa.
Goodzọ dị mma iji mata ịdị mkpa nke obodo gafere n'akụkụ osimiri bụ ịlele etu ịdị na akwa mmiri ya hà. N'ihe banyere Shanghai, lee anya na Nanpu Bridge, akwa ahụ mara mma nke gafere Osimiri Huangpu.
Obodo mmuo nke Fengdu
Ugwu Ming, na ngwụcha ngwụcha ebe ugwu Osimiri Yangtze na China, bụ Fengdu, "obodo ghost." Ọ bụ ebe dị omimi na-adọta ndị njem si n'akụkụ ụwa niile, mana ọkachasị ụmụ amaala sitere na mpaghara ndị ọzọ nke mba ahụ. Ọ bụkwa na ebe a bụ ebe zuru oke iji mụta ihe niile gbasara ọdịnala ndị China na mmụọ.
Efere nri Cantonese
N'oge a, anyị ga-ekwu maka nri Cantonese, gastronomy nke sitere n'ógbè Canton, na ndịda ...
Huangluo, China: ụmụ nwanyị nwere ntutu kachasị ogologo na ụwa
N'ụwa nile, ụmụ nwanyị na-echegbu onwe ha inwe ntutu mara mma, mana maka ụmụ nwanyị Yao Huangluo na China, ọ bụ maka ihe ọzọ. Ntutu bụ ihe onwunwe kachasị dị oké ọnụ ahịa ha, akụ nke ha na-elekọta oge ndụ ha niile, na-ahapụ ya ka o too ruo ụbọchị ha nwụrụ.
Laolongtou: ebe nnukwu mgbidi na-ezute oké osimiri
Anyị ekwuola ebe a ọtụtụ oge banyere nnukwu mgbidi nke China: ndọtị ya, ọnọdụ nchekwa ya, otu esi aga ebe a ga-eleta ya ... Mana, anyị ekwutụbeghị ebe ọ kwụsịrị. Iji chọpụta, anyị ga-aga Shanghaiguan, nke dị na Qinhuangdao, ihe dị ka kilomita 300 n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo Beijing.
Ihe ị ga-ahụ ma mee na Guangzhou
Guangzhou (Canton) bụ obodo nke atọ kachasị ukwuu na China na n'afọ ndị na-adịbeghị anya ọ na-ejide Beijing na Shanghai n'ọtụtụ ndị ọbịa. Naanị awa abụọ site na Hong Kong na Macau, ọ bụ ebe ndị njem na-aga Asia na-achọsi ike ma jiri ya kpọrọ ihe. A bụ ihe a ngwa ngwa ndu na obodo
Top 5 pagodas nke China
Otu n’ime owuwu ewu ewu ewu na ama ama n’ụwa niile bụ pagoda. Ugbu a na Asia niile, mmalite ya laghachiri ...
Lọ atọ kachasị elu na Hong Kong
Hong Kong bụ otu n’ime obodo ndị kachasị adọrọ mmasị n’ụwa. Ahụrụ m ya n'anya n'ihi na ọ bụghị naanị banyere skyscrapers ...
Nọmalị mgbe anyị na-eche maka ime njem gaa Eshia, gaa na mausoleums, ọdịnala oge ochie, njem ...
Zụ ahịa na China: Ahịa Shanghai (Nkebi 2)
Anyị na-amatakwu ahịa Shanghai ma chọta Shanghai Longhua. Ọ bụ ahịa ebe ị nwere ike ịchọta uwe ...
Zụ ahịa na China: Ahịa Shanghai (Nkebi 1)
Onye na-anaghị achọ ịga ahịa? Azịza ya bụ enweghị obi abụọ ọ bụla. Oge nke a ...
Eziokwu na-akpali mmasị ma na-achọ ịma banyere China
China bụ ebe mara mma ileta ma eleghị anya yana ihe niile ị ga - eme, ọ ga - abụ ...
Templelọ nsọ ahụ dị omimi nke White Cloud
Templelọ nsọ nke White Cloud, na China, dị na mpụga Xibianmen, na Beijing. Ọ bụ otu…
Otu esi aga Guilin? Lightsgbọ elu, ụgbọ oloko na bọs
Guilin bụ obodo dị na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ nke Guangxi Zhuang Autonomous Region, na China. Iji